ဗေဒင် Archives - Channel Lover
June 1, 2022 by Channel Lover
ပါးပျေါက မှဲ့ပိုငျရှငျ” ရညျးစားရဖို့ ဘယျတော့မှ အောကျကမြခံဘူး။ သလေောကျအောငျ ခြောနေ လနျထှကျ နပေါစေ ၊ သဲသဲလှုပျ ခဈြမပွတတျဘူး။ ကိုယျက ခဈြတဲ့သူထကျ ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့ သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါတတျပါတယျ ……။ – နဖူး.ပျေါက မှဲ့ပိုငျရှငျ” သနားတတျတဲ့စိတျ အားနာတတျ တဲ့စိတျကွောငျ့ ခဈြသူတဈယောကျ ရတတျတယျ။ အဲ့ခဈြသူက အနိုငျယူတာ ခဏခဏငိုအောငျ စိတျညဈအောငျ လုပျတာကွုံရ တတျတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ခဈြသူကပဲ သငျ့ကို သစ်စာရှိရှိ ခဈြမယျ့သူ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့ …။ – မကျြခုံး တဈဝိုကျက မှဲ့ပိုငျရှငျ” အခဈြစဈရဖို့ အခြိနျတှေ မနညျးရငျးရ တတျတယျ။ စနျးပှငျ့ပွီး လူခဈြလူခငျ ပေါတယျ။ အသရေရ အရှငျရရ ခဈြပွမယျ့ … Read more
ဘာလုပ်လုပ် အ ဆ င် မ ပြေ ကံ နိ မ့် တ ယ် လို့ ခံစားနေရရင် ဒီ နည်းလမ်းလေး သုံးကြည့်ပါ
ဘာလုပ်လုပ် အ ဆ င် မ ပြေ ကံ နိ မ့် တ ယ် လို့ ခံစားနေရရင် ဒီ နည်းလမ်းလေး သုံးကြည့်ပါ အညှိများပယ် အနှောင့်များကင်း ဆား၂ဆုပ်အစီရင်….စိတ်မကြည်ဘူး မလန်းဆန်းဘူး စိတ်တွေထိုင်းမှိုင်းနေတယ် ဘာလုပ်လုပ်အဆင်ပြေမနေဘူး။ အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတားတွေလည်းများနေတယ် ။ လာဘ်ပိတ်နေတယ်…အရောင်းအဝယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ယုတ်စွအဆုံး ဘုန်းကံနိမ့်နေတယ်လို့ စိတ်ကခံစားရရင်သေချာတယ် သင့်မှာ အံ့မိတာ အညှိတင်နေတာ အပ အညံ့ အခိုက်တွေများနေတာ၊ အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေ တွေ့ကြုံခံစားနေခဲ့ရင် အစစအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ထိရောက်တဲ့ဂမ္ဘီရအစီရင်လေးတခု ဒါနပြုပါ့မယ်…။ မိမိလက်၂ဖက်… ညာလက်မှာဆားတဆုပ် ဘယ်လက်မှာဆားတဆုပ် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သက်သောင့်သက်သာစွာ ထိုင်ပါ။ပြီးလျှင် မိမိစိတ်ထဲက လေးနက်စွာ အာရုံပြုဆန္ဒပြုရမှာက မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ အညှိတင်နေတဲ့ အံ့မိတာတွေ မကောင်းတဲ့အပ အညံ့ အခိုက်တွေကို … Read more
မတ်လ (11) မှ (17) ရက်နေ့အထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း
March 11, 2022 by Channel Lover
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သတိနဲ့ယှဉ်ပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါ။ ဒီကာလက လုပ်သမျှလွဲချော် နေတတ်လို့ပါပဲ။ မိမိဆရာသမားတွေအဆင်မပြေလို့ထောက်ပံ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အမိအဘကျန်းမာ ရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းဖို့အတွက် မသမာနည်းနဲ့ ငွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့ အဖမ်းအဆီးရှိနိုင်တဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပ်ကတော့ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေရာပြောင်း၊ဌာနပြောင်း ၊ရုံးခန်းပြောင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက ပစ္စည်းမှာမယ်ဆို လမ်းခရီးကြန့်ကြာတာ၊လမ်းမှာပစ္စည်းတွေဖွင့် ဖောက်စစ်ဆေးမှုကြောင့်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်တတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘုန်းတန်ခိုးနိမ့်စေနိုင်တဲ့ကာလမို့ ယုတ်ညံ့ တာမျိုးတွေကိုအထူးရှောင်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်လုပ် ကိုင်ကျသူများပိုမိုသတိကပ်လိုက်ပါ။ သားသမီး တွေ စကားနားမထောင်တာကြောင့် ဆူပူနေရတတ်ပါတယ်။ ကျန်း မာရေးမှာတော့ အစားကို လွန်ကဲစွာစားခြင်း ကြောင့် အစာမကြေဗိုက်အောက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အေးစက်နေတဲ့ အချစ်ရေးအနေအထားကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် သွေးပူအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အိမ် ထောင်ဘက်ရဲ့အကူအညီတွေကို အထူးရလိမ့် မယ်။ ပညာရေးအားသာချက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်း 1/3/6 အထူးဟော စိတ်လေနေတတ်ပါတယ်။ယတြာ ဘုရားရှင်ကို ရေသပ္ပယ်ပြီးတော့ သစ်သီးဆွမ်းကပ်လိုက်ပါ။ … Read more
ကံပိတ်နေသူများ အတွက် ကံခေါ်နည်း
March 8, 2022 by Channel Lover
ကံခေါ်နည်း(9)ချက် ကံပိတ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ အလွန်နက်နဲပါတယ် လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင် နေအိမ်အခန်းထားသိုမူ့ အမှားအယွင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအမှားအယွင်းအခိုက် ဘုန်းကံနိပ်စေမူ့ အပြုအမူတွေအပြင် အတိတ်အကုသိုလ်ကံရဲ့ အတားအဆီး အစရှိသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံကနေရှိနေနိူင်ပါတယ် အခုပြောမယ့် နည်းကတော့ အဲဒီအတားအဆီးတွေ ကျော်လွှားပြီး မိမိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်နေသမျှကံပိတ်တာတွေတဖြည်းဖြည်းအားနည်းစေပြီးကောင်းကံတွေအကျိုးပေးလာစေမှာပါ အခုလုပ်ရမယ့် အရာတွေကို ပြောပြပါမယ် No(1) မိမိပြုခဲ့ဖူးသမျှသော ကုသိုလ်တွေထဲက မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ခဲ့ရပြီး ပီတိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ်11မျိုးကိုစာရွက်နဲ့ ချရေးပြီးပလပ်စတစ်လောင်းထားပါ နံနက်တိုင်းအိပ်ယာထထချင်း အဲဒီစာရွက်ကိုအစအဆုံးဖတ်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ပါစေ အဲဒီစာရွက်ကိုဖတ်ပြီးမှသာ မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပါ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာမှတ်မှတ်ရရ ကုသိုလ်က11မျိုးမရှိသေးလည်း ရှိသလောက် ချရေးပါ ပြည့်အောင်ထပ်လှူပါ ထပ်ဖြည့်ရေးပါ No(2) နံနက်တိုင်း ဆဲဆိုတိုင်းထွာခြင်းရှောင်ပါ အကောင်းဆုံးက မေတ္တာသုတ်တရား ဖွင့်ပေးပါ No(3) အိမ်ရှေ့ လမ်းမပေါ်ဆန်ကြဲပါ No(4)မျက်နှစ်သစ်နေစဉ် … Read more
ဆရာမင်းသုခရဲ့ 2022ခုနှစ် (3)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း
March 7, 2022 by Channel Lover
ဆရာမင်းသုခရဲ့ 2022ခုနှစ် (3)လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟာစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးအတွက် တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသောအကူညီများရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်းမလုပ် သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင် မနာလိုသူပေါများမည်။ ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသောခရီးဝေး မထွက်သင့် ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့်တတ် သည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက် ၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်သူနှင့်အိမ်ထောင်မရှိသူများ ချစ်သူ ရည်းစားအသစ်ရမည်၊ အိမ်ထောင်သည်များ သားသမီး ရတနာထွန်းကားမည့်လဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမည့်လဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် အညံ့များပြေပျောက်စေရန် ယတြာ အိုးတစ်လုံးတွင်သဲအပြည့်ထည့်ပီး ရေအနည်းငယ်လောင်းပါ၊ ပီးလျှင် ရွှေထီး၊ ငွေထီးစိုက်၍ ဘုရားတွင်လှူပါ။ာ မိမိလိုရာ ဆုကိုတောင်းပါ။ တနလာ င်္သားသမီးအတွက် ဤလအတွင်း ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ် လာလာ မိမိထက်ကြီးသူ၊ ငယ်သူနှစ်ဦး … Read more
မင်းသမီး Tangmo 🍉 ရေထဲပြုတ်ကျသည့်အကြောင်းရင်း ဆရာဂျေဂျေ ရှင်းပြ(ရုပ်သံ)
March 3, 2022 by Channel Lover
မင်းသမီး Tangmo 🍉 ရေထဲပြုတ်ကျသည့်အကြောင်းရင်း ဆရာဂျေဂျေ ရှင်းပြ(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အမှန်တရားမကြာခင်ပေါ်လာတော့မယ်.. သွေးအေးပြီး အသိတရားခေါင်းပါးတဲ့စိတ် လူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်က ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဘဲ ဒီvideoကြည့်ပြီး အသိတရားတစ်ခုယူတတ်ပါစေ ဘာသာပြန်ပေးထားတယ် ယုံသူမှကြည့်နော် မဆဲကြနဲ့နော် မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ… ဘုရားတွေလဲ အမြန်ဆုံး ဖူးမျှော်နိုင်ပါရစေ အရှင်ဘုရား…. unicode မငျးသမီး Tangmo 🍉 ရထေဲပွုတျကသြညျ့အကွောငျးရငျး ဆရာဂဂြေေ ရှငျးပွ(ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ အမှနျတရားမကွာခငျပျေါလာတော့မယျ.. သှေးအေးပွီး အသိတရားခေါငျးပါးတဲ့စိတျ လူ့ရဲ့စိတျဓာတျက ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးဘဲ ဒီvideoကွညျ့ပွီး အသိတရားတဈခုယူတတျပါစေ ဘာသာပွနျပေးထားတယျ ယုံသူမှကွညျ့နျော မဆဲကွနဲ့နျော မွနျမာပွညျကွီးလဲ အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြးနိုငျပါစေ… ဘုရားတှလေဲ အမွနျဆုံး ဖူးမြှျောနိုငျပါရစေ အရှငျဘုရား…. မင်းသမီး Tangmo … Read more
ဖူးစာဆုံ၊အိမျထောငျကခြွငျးအား လက်ခဏာမြား လူ့လောကတှငျ ခဈြသောသူနှငျ့ ဖူးစာဆုံခငျြကွတယျ၊ အိမျထောငျရကျသားကပြွီး ရိုးမွကြေ တူနှဈကိုယျ ဆိုးအတူ ကောငျးအတူ ပေါငျးဖကျပွီး သားသမီး၊မွေး မွဈတှနေဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျနခေငျြကွတာပါ။ ဒီလိုခဈြသူအိမျထောငျဘကျ တှဟော ခဈြသူဖွဈတဲ့အခြိနျကစပွီး သဆေုံးသညျ့တိုငျ မခှဲမခှါဘဲ ဆိုးအတူ ကောငျးအတူ လက်ခဏာပညာနဲ့ သုတသေနပွုကွညျ့ပါတယျ။ဒီအခါ လကျဖဝါးပွငျမှ ပွောပွသော ဖူးစာရေး၊အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး တှကေ ဘာတှလေညျး ဆိုတာ သိလာရတယျ။ ခဈြသူဘဝမှာဘဲ လိမျညာတဲ့ အတုအယောငျအခဈြတှနေဲ့ ဝေးကွရမှာလား၊ မိဘတှကေဘဲ ခှဲတော့မှာလား၊မမွငျနိုငျတဲ့ ကံတရားတှကေ ဘာလညျး။ သူက ဖူးစာရှငျအစဈအမှနျလား၊ ရိုးမွကေပြေါငျးရမလား၊ လမျးခှဲသှားမှာလား၊ အိမျထောငျကပြွီးမှ အနိုငျကငျြ့လမေလား၊ သူ့မိဘတှကေရော ဘယျလိုလညျး၊ သူကသစ်စာရှိသူလား၊ သာသမီးထှနျးကားပါ့မလား၊ စသညျ့ အိမျထောငျရေးဆိုငျရာ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ အဖွကေို သူတို့ရဲ့ လကျဖဝါးပွငျမြားက … Read more
မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အတွင်းမိုးရွာသွန်းနိုင်သော ဒေသများ
မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အတွင်းမိုးရွာသွန်းနိုင်သော ဒေသများ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်ခရိုင် မြိတ်ခရိုင် ကော့သောင်းခရိုင်တွေမှာ ၂၀၂၂ မတ်လ ၂ရက်နေ့မှ၎ရက်နေ့အတွင်း မိုးရွာနိုင်ပါတယ် ခန့်မှန်းချိန် 25/02/2022 at 2:30pm(MMT) 𝙎𝙪 𝙎𝙪 𝙎𝙖𝙣 နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ယနေ့နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီအချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်အကျဉ်းချုပ်။ လွန်ခဲ့သော(၂၄)နာရီအတွင်းက ကချင်ပြည်နယ်တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာခဲ့ပြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် တိမ်အသင့်အ တင့် ဖြစ်ထွန်းခဲ့ကာ၊ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် အများအားဖြင့် သာယာခဲ့ပါသည်။ ညအပူချိန်များမှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ၏ပျမ်းမျှအပူချိန်အောက် (၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ … Read more
24.Feb.2022 မှ 2.Mar.2022 အထိတဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
February 24, 2022 by Channel Lover
24.Feb.2022 မှ 2.Mar.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အကျိုးပေးတဲ့ကာလပါပဲ။ အပြောင်းအလဲလုပ်တာ၊လက်ရှိအနေအထားကနေ တစ်ခုခု ကိုရွှေ့လျားဆောင်ရွက်လိုက်တာက အဆိုးကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ နရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲတွေလဲ လိုအပ်မှသာလုပ်သင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ လူချစ်လူခင်များမယ်။ လူလွတ်များစန်းပွင့်မယ်။ ချစ်ရသူကို ဖွင့်ပြောလို့ကောင်း တယ်။ အထက်လူကြီးဆီ တင်ပြပြောဆိုလို့ကောင်းတယ်။ လက်ထပ်ချင်တဲ့စုံတွဲများ လူကြီးတွေဖွင့်ပြောတာ၊ နားဖောက် တာတွေဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ ငွေကြေးအကူအညီတွေရလွယ်တယ်။ မိဘဆီကဖြစ်စေ၊ အလုပ်က ဖြစ်စေ မုန့်ဖိုး ဆိုတာမျိုးတွေရတတ်ပါတယ်။ အလွယ်တွေးရင် အလွယ်ဖြစ်မယ်။ လေးလေးနက်နက်တွေးပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒီကာလမှာလေးနက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလိမ့်မယ်။ချစ်ရေးဆိုဖို့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်သလို အဖြေပေးခေါင်း ညိတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။ ငွေကြေးကံတွေလဲ မညံ့တော့ပါဘူး။ LDRSတွေ အတွက်တော့ အချစ်ရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်နဲ့စွပ်စွဲပြောဆို ခြင်းခံရနိုင် ဖွယ်ရှိ နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးကလဲ ဒီကာလအားနည်းချက် သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေး က တော့ စီးပွားရေး … Read more